Uncontrollably Fond ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel July 08, 2016
ဒီဇာတ်​ကား​လေးကို​တော့ နာမည်​ကြီးမင်းသားတ​ယောက်​ဖြစ်​တဲ့ Kim Woo-bin နှင့်​ " Miss A " K Pop အဖွဲ့မှ မင်းသမီး Bae Suzy တို့ ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​လေးပါ ...လက်​ရှိ ​တောင်​ကိုရီးယားမှာ ထုတ်​လွှင့်​​နေတဲ့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​တွေထဲမှာ hot အဖြစ်​​နေဆုံး series ​လေးတစ်​ခုပါ ... DOTS လို့ အများသိကြတဲ့ Descendants of the Sun ကို​တောင်​ ဖြတ်​​ကျော်​နိုင်​မယ်​လို့ ထင်​​ကြေး​ပေး​နေကြတဲ့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​လေးတစ်​ခုပါ ... အစ အဆုံး ရိုက်​ကူးပြီးမှ ထုတ်​လွှင့်​ခြင်းလဲ ဖြစ်​ပါတယ်​ ...
ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း​လေးက​တော့ - မင်းသား Woo-bin နဲ့ မင်းသမီး Suzy တို့ ငယ်​စဉ်​အခါထဲက ချစ်​သူ​တွေဖြစ်​ခဲ့ကြပြီး ကံကြမ္မာရဲ့ အ​ပြောင်းအလဲတစ်​ခု​ကြောင့်​ ​ဝေးကွာသွားခဲ့ရပါတယ်​ .. အရွယ်​​ရောက်​လာ​သောအချိန်​မှာ​တော့ Woo-bin က နာမည်​ကြီး top star တ​ယောက်​ဖြစ်​လာပြီး​တော့ Suzy က​တော့ PD တ​ယောက်​ဖြစ်​လာခဲ့ပါတယ်​ ...
ဘယ်​လို အ​ကြောင်းအရာ​တွေက သူတို့ကို ပြန်​ဆုံ​စေမလဲ ?
အရင်​တုန်းကလိုပဲ သူတို့ ပြန်​ချစ်​​နေသွားကြမှာလား ?
သူတို့ နှစ်​ဦး မထင်​မှတ်​ထားတဲ့ အရာ​နဲ့ ရင်​ဆိုင်​ရတဲ့ ဘာ​တွေ ဆက်​ဖြစ်​သွားမလဲ ? ဆိုတာကို​တော့ ဇာတ်​​လမ်း​လေးမှာ ကြည့်​ရှု​ပေးကြပါ​နော်​ ...
လက်​ရှိမှာ​တော့ အရမ်းကို ​ရေပန်းစား​နေတဲ့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​လေးတစ်​ခု​ပေါ့ဗျာ .. Jul 16 ကမှ ကိုးရီယား ရုပ်​သံမှာ ထုတ်​လွှင့်​ပြသခဲ့တဲ့ ထုတ်​လွှင့်​ဆဲ series ​လေးပါ .. DOTS ကို​တောင်​ ​ကျော်​တက်​မယ်​ ​ရေပန်းစား​နေ​တော့ မ​ကောင်းစရာ​တော့ အ​ကြောင်းမရှိဘူး​ဗျ ... ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦး ...
Korea Melodrama Romance
Labels: Korea Melodrama Romance
tun lin July 23, 2016 at 9:57 AM
pyae phyo July 23, 2016 at 10:34 AM
Ok Mon July 24, 2016 at 11:26 AM
please! give me the next episodes
Ok Mon July 24, 2016 at 11:32 AM
ဘယ်တော့မှ တင်ပေးမလဲ အပိုင်း ၃ ၄ ၅ တွေကို
ငါဒီမှာ ရူးတော့မယ် အမြန်တင်ပေးပါတော့ ကျေးဇူးပြုပီး
Ok Mon July 24, 2016 at 11:35 AM
အပိုင်း ၃ ရော တင်မပေးတော့ဘူးလား
hinn way August 4, 2016 at 12:22 AM
Goldchannel မှာ အပိုင်း ၈ ထိ တင်ပီးပါပီ ခင်ဗျ
ko ko thet August 5, 2016 at 2:16 PM
bladeblade blade August 29, 2016 at 6:59 AM
Ye Naing August 29, 2016 at 7:04 AM
Ye Naing September 3, 2016 at 5:06 AM
Gold Channel မှာ Epi-18 ထိတင်ထားတယ်နော်
Khun HlaMoe September 15, 2016 at 3:41 AM
aezin kyaw September 19, 2016 at 3:22 AM
​နောက်​အပိုင်း​လေး မတင်​​ပေး​တော့ဘူးလား ​စောင့်​​နေပါတယ်​..